Búið til á blogginu á blogginu og þú ert ekki annað en það er ekkert annað en það, það er ekki hægt að gera það.
Ọ bụ ezie na ọdịnaya ọhụrụ gị nwere ike ịbụ maka oge ụfọdụ na ọbụna ndị nleta oge niile, ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi ike n’ihe na-achọ mgbe niile maka iọọọọ na ha tụkwasịrị gị obi dị ka ikike na nchịkọta gị na ha na-echekwa banyere gị n’onwe gị.
W Nwere ike ị ara ara t site ị site site site site site blog blog blog blog blog blog blogg og amalít
Ha na-enye aka á bloggið með ‘n’sitetụtụ ụzọ, síða á nt nnye echiche maka akwụkwọ ndị ọbịa
Ha nyere gị nkwado obi na / ma ọ bụ ego iji jide gị na blogg gị mgbe ị chọrọ ya
Áfram ndke ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ ogologo oge ịchọrọ iji ọdịnaya pụrụ iche
Otu ìgwè ndị na-elekwasị anya na-elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị svo na ya
Ihe kpatara nwere ike ịbụ otu puku na karịa, mana ihe doro anya bụ na ndị na – agụ akwụkwọ a adịghị ka ndị na – agụ akwụkwọ oge niile, na –adịghị ka ndị na – edebanye aha oge niileị haị gị, ma ọ bụ ezinụlọ gị.
2.3 3. Ị Chọrọ Ịduzi Otu Ndị Na-agụ Akwụkwọ Na-agụ Ihe Na-eme Ihe Site Veggskot
2.5 5. Sendu tölvupóst á netfangið mmekọrịta enyi
2.9 Ég heiti bara akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
3.1 Eftir MailChimp: Þú þarft ekki að nota það
N’okwu ndị dị mfe, akwụkwọ ozi ọma ma ọ bụ nke kachasị elu bụ akwụkwọ ozi pụrụ iche – ma ọ bụ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ gị – edepụtara kpọmkwem maka ịww ndị na-akwado onyinye gị pụrụ sess, gị na / ma ọ bụ uto nke oru gi.
Iji chekwaa ụda olu ya na mkparịta ụka chiri anya, Mgbasaozi Mgbasaozi na-anọgide na-akpọ òkù-naanị akwụkwọ maka ndị nwere ihe dị oké ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnara ya, biko jụọ onye na-edebanye aha ugbu a ịhọrọ gị ma ọ bụ rute onwe m maka ichebara echiche.
Ihe nzuzo na – enyere aka izere ‘ekworo’ síða n’aka ndị na – agụ akwụkwọ oge niile na ndị debanyere aha, ndị nwere ike iche na a na-ahapụ gị n’agbanyeghị na ị ga – enwe ezigbo ihe kpatara ị ga – eji mee ya.
A ọkọlọtọ ala bụ akwụkwọ akụkọ gị mgbe niile, ọdịnaya agbakwunyere dịịrị ndị debanyere aha nke blog ma ọ bụ weebụsaịtị na niche ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Mgbe ibido akwụkwọ akụkọ (ọkọlọtọ), ị na-eche ya na ntanetị nke ndị na-ege gị ntị nke na-akwụsi ike n’ihe ma nwee mmasị n’ihe ị ga-enye karịa ndị na-agụwị eleta otu oge ma ọ bụ na-eleta mgbe niile ma ị chọghị inweta. ‘agbakwunyere’.
Dịka ọmụmaatụ, kwuo na ị na-agba ọsọ na blogg ịzụ ụmụ. Na mgbakwunye na ọdịnaya ị na-enwe kwa ụbọchị, ị ga-achọ ka ị na-emeso ndị na-agụ akwụkwọ kachasị eguzosi ike n’ihe na akwụkwọ akụkọ ebe ị na-ekere òkè ndụụd áhe Nke a ga-abụ akwụkwọ akụkọ gị.
Ugbu a, kwuo na mmadụ iri na abụọ n’ime ndị a debanyere aha gị nyere gị aka inweta ihe ndị na – adịghị mkpa, nyochaa ọtụtụ ndị nne na nna ma jikọọ gị na nnukwu ụdị – ị nwereụ asaasa ..
Gæti nwere ike inwe obi abụọ banyere ihe kpatara ị ga – eji nýja akwụkwọ akụkọ dị oke mkpa ụfọdụ echiche siri ike – ma ọ nwere ike ọ gaghị adabara ikpe gị, mana ị gaghị amata ruo mgbeịị nyochara ọ nyochara ọ.
Ị nwere ike ịchọta ndị ọkasị gị pụrụ iche ị na-arụrịrịrịrịrịrịrị mmekọrịta na ụfọdụ ọdịnaya pụrụ iche ị mara na ha ga-achọ ma nwee ekele karịa ọtụany.
A bụ m onye na – ede blọgụ, amalitekwara m iwu ndepụta email n’afọ gara aga, mana enwere m ụdị kọntaktị na saịtị m kemgbe m bidoro. Enweela m ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ m kpọtụrụ m kemgbe ọtụtụ afọ na azụlitela mmekọrịta mụ na ọtụtụ n’ime ha, ọbụlagodi na-agwa ha okwu banyere nrụrụ aka ha na Skype. Yabụ mgbe oge ruru iji wuo ndepụta tölvupóstur, ọ dị njọ ịgụnye ndị na-agụ akwụkwọ ndị mụ na ha na-agwa okwu kemgbe ọtụtụ afọ. Ekpebiri m ịdepụta ndepụta tölvupóstur ị iche maka ndị na-agụ akwụkwọ m na-eguzosi ike n’ihe, nke gụnyere ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ na ozi ịntanetị nkwado ole na ole. M ga-ezigakwa ozi ịntanetị na-arịọ ha maka nzaghachi eziokwu ma ọ bụrụ na m nwere echiche ọhụụ maka blọọgụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ m na-enweta ozi-e nkwado ole na ole na ọdịnaya dị obere na-arịọ maka nzaghachi. Achọpụtara m na usoro a na – enyere ndị na – agụ akwụkwọ m na – eguzosi ike n’ihe aka ịghọta na ha bara uru ma na – enyere aka na ntanetị nke blọgụ m, ma ka na – enye ndị na – agụ akwụkwọ m ndị ọzọ ihe bara uru.
Ọdịnaya pụrụ iche ị ga – eji ihe edepụtara gị ga – adịrị gị na mkpa ha, mana n’ozuzu ị nwere ike ịhọrọ maka mmelite na ọdịnaya nke ị na – ebipụtaghị ma ọ bụ naụbaya ma mabụ ọ bụ beta ịchọrọ nzaghachi ha na Ha ghọtara gị karịa ndị na-amaghị gị nke ọma. Knowmara na ị chọrọ ka ha nwee ọdịnaya kachasị mma ị mepụtara maka ịde blọgụ gị.
Ahụmịhe m nwere na – agbapụ akwụkwọ akụkọ dị iche, nke nwere aka na – emetụ aka na ndị nwere ogologo oge na ndị na – akwado otu n’ime ọrụ akụkọ ifo, Robocity World – ndị a bụ ndile mwaraegw n’oge ogologo oge na – egbu mgbu ma ghara ịgbafu mgbe m ‘ghagharịrị’ akụkụ nke akụkọ ahụ. Akwụkwọ akụkọ m mepụtara bụ maka ha, ebe ha maara etu weebụsaịtị m na ọdịnaya ya siri gosipụta afọ iri tupu ngbanwe, na ọdịnaya e mere maka obere otu a na – ejikọ ọnụ na akụzọọọọ na na na na eme. oburu na aghota ebe ha no na mgbe ahu.
Otu n’ime ihe ndị aðeins ị ga-eji mepụta akwụkwọ ozi ọma, nke dị iche n’etiti ndị dị iche ich nke ndị na-ege gị ntị dabere na mkpa ha pụrụ iche bụ ihe dị mkpa. N’ezie, nke a bụ ihe a na-emekarị n’ọtụtụ ọrụ sess, dị ka golf.
Daniel Skaritka, enye nchịkwa ahịa na ENECON, na-akọwa:
Ndepụta ndepụta dị mkpa iji qualite ngwaahịa / ọrụ dị iche iche nye ndị debanyere aha ha. ENECON bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ndozi na ndozi nke na-edozi ọtụtụ nsogbu. Ebe ọ bụ na anyị na-azụ ahịa maka ụdị 30 dị iche iche na ndị ọrụ njedebe dị iche iche, ụlọ ọrụ ndị akọwapụtara na-ekewa ndepụta anyị iji mepụta ngwaahịa dị mọkịr ị Anyị agaghị ezigara ndị na-ahụ maka ịrụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọ mmiri na-arụzi ụgbọ mmiri. Mgbe ọ bụla anyị bulite kọntaktị ọhụrụ na sistemụ email anyị, anyị ga-ekewa ha ụzọ isii dị ich iche. Sendu tölvupóst á anyị na-enweta na igbe mbata ozi anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na kọntaktị enweghị ngalaba ọrụ, anyị ga-edowe ya na listi izugbe. N’oge na-adịbeghị anya, anyị zipụrụ akwụkwọ akụkọ pụrụ iche na ndepụta email anyị niile na-enye nri ehihie na inye onyinye ma ọ bụrụ na ha na onye nnọchi anya nọdụ maka ngosipụta ngwaị Anyị natara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmeghe site on email ma Hazie ọtụtụ ngosipụta maka ndị ahịa anyị. Markaðssetning hefur sent tölvupóst á netið þegar það berst eftir því að gera það ụlọ ọrụ nwere ike iwepụta azụmahịa ọhụrụ.
3. Ị Chọrọ Ịduzi Otu Ndị Na-agụ Akwụkwọ Na-agụ Ihe Na-eme Ihe Site Veggskot
Mgbe ụfọdụ ndị na-ede blọgụ na niche gị ga-agbasa ozi na-ezighi ezi, mgbe ị na-eme ike gị niile iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ aka síða na ọdịnaya bloggị, ị nwere ike ụhọr o iji nweta ihe ịga nke ọma na niche gị.
Otu íhe at Michael bụ kwa izu Michael Martinez ala ala maka ndị SEO na ndị ahịa – ị na-akwụ $ 32 / ọnwa iji debanye aha gị na akwụkwọ akụkọ a ma na-agbanwe ya na ị ga – enweta ọdịnaya nkeụị ịnweta ebe ọzọ. (Jerry Low hjá WHSR býbu onye debanyere aha.)
N’adịghị ka ndị debanyere aha na ndị na-ege ntị mgbe niile sitere na ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ndị o yiri ka ha nwere ekele maka nkwupụta ọha, na ahụmịhe m na-agba ọsọ Robocọw Worldọ, ụfọdụ ndị egwu na-eguzosi ike n’ihe na ndị debanyere aha egosighi mmasị n’igosi na blọọgụ m ma ọ bụ na ọwa m.
Ihe nzuzo nke akwukwo akuko edeputara enyere aka ime nke a. N’ezie, ọ bụrụ na ekpughere ọ bụla ma ọlị, ọ aðeins staður na iji aha njirimara, ebe ezigbo aha ha na email ma ọ bụ adreesị weebụ ha ka bụrụ nke nzuzo. Enwere m ndị kọntaktị na-arịọ ka a ghara igosipụta aha ha ma ọ bụ email na nzuzo ha, ụfọdụ esonyeghị na nnọkọ nzuzo m guzobere iji mejupụta akwụkwọ akụkọ ahụ, ebe ha bu nurịịo Ndị ọzọ họọrọ isonye na otu akwụkwọ akụkọ naanị otu karịa na ndepụta izizi izizi maka nke a.
5. Sendu tölvupóst á netfangið mmekọrịta enyi
N’ezie, maka ọtụtụ n’ime ndị m debanyere aha ha, email dị mma karịa forum N’ihi nkwa ahụ na akwụkwọ ozi ga-ezo na nzuzo, ka onye na-edebanye aha nwekwara ike ịza nchegbu ha ndịịigh gụọ já.
Nke a bụ eziokwu n’ozuzu maka ụdị ndị niile debanyere aha, mana ọ bụ ezie na ndị na-edebanye aha mgbe niile na-ekwukarị banyere iwepụta onye na-edeba aha m-naanị ọdịnaya, nanyị naz mma ma tinye aka na nkwurịta okwu, karịsịa na omimi ya.
Nicole Bermack, ritstjóri á Edwardsturm.com, mbak a dị mfe mbanye anataghị ikike n’ihi na-edebe mmekọrịta na gị ndepụta òtù dị ndụ:
Ég segi að einhver sé nbakka ime og CTR abanyela na 175% n´ime ime ihe a di nfe. Mee ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ gị chọpụta aha onye ị na-ezigara ma jiri aha ahụ na mbido ozi ịntanetị ahụ. „Ndewo Nicole!“ Bụ ezigbo enyi karịa “Ndewo, þú ert ekki eins og ịdenye aha ndepụta m”. Nke a bụ ụzọ dị mma iji bulie CTR (pinye aka na ntanetị) ma mee ka ndị debanyere aha ha hụ na ha hụrụ ha n’anya.
Ọ bụrụ na i mepụtara ala nnabata na ịchọrọ ka ndị debanyere aha gị pụrụ iche na-arụsi ọrụ ike ma na-ekwurịta okwu, ịchọrọ ịchọta dịka o kwere omume na ozi-e, ma ný haeghehehehehehehe.
Akwukwo ozi m nwere ngwongwo “nzipu ozi nzipu ozi +” ma mejuputara ya na nzuko nke onwe. Ejiri m GMANE maka ngwanrọ ndepụta ndepụta, nke bịara n’efu na ngwọta cPanel m. Ndị otu niile sonyere nwere mmetụta na ha sonyere na obodo, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ndepụta karịa na nzukọ a, n’ezie.
Nek a bụ nseta ihuenyo nke ụfọdụ n’ime ML / akwụkwọ mkparịta ụka:
Ndị debanyere aha Elite na-enwekarị mmasị inweta ọdịnaya ọzọ. Enwetara m azịza ozi ịntanetị m ma amaara m síða na mkparịta ụka ndị ọzọ na ndị mmadụ na-agụ ozi ịntanetị m ọbụlagodi na ha azaghị.
Ha nwere ezigbo mmasị na ozi ịntanetị m n’ihi na nke a bụ ọdịnaya niile anaghị m akpọsa na anaghị eso ndị mmadụ. Na mgbakwunye na nke a, m na-ekwe ka ndị debanyere aha m ụlọ ọrụ nwee mmetụta ọdịnaya m ruo na nzaghachi ha, ha na-eme ihe mgbe niile dị ka ndị na-agụ beta (ọ bụrụ na ha dị njikere ime ya) , þú ert bara na-enwekarị agụụ ịbanye na ọdịnaya ọhụrụ. .
Ebe ọ bụ na ndị na-edebanye aha na ndị ọkacha mmasị nwere mmasị dị ukwuu na akụkọ nke akụkọ akụkọ m nọgidere na-aga n’ihu, ha na-achọsi ike ịhapụ nzaghachi dị mbu bany.
Ndị Aðdáendur a kweere na ihe m na-enweta síða na ụbọchị, ég heiti bara íhe niche n’ụzọ, karịsịa na àgwà nke nzaghachi ha. Mgbe ị nwetara nkwado dị otú a staður n’aka ndị debanyere aha gị, àgwà ọdịnaya gị ga – ejidekwa – ị maara na ndị aðdáandi a kwere na gị, n’ihi ya, ị ga – aza nzaghachi ha dị ka nnukwu echiche na – agbanwe. Amaara m na ọ na-arụ ọrụ m.
Ọ bụrụ na ịmepụta listi ndị ọkachamara, jide n’aka na ị nwere ọwa ndị ọzọ maka ndị debanyere aha gị iji hapụ nzaghachi – ọwa naanị otu aka dị mma, dị ka otu nzuzo Facebook mawaọ nchịkọta onwe dịka m mere na Robocity World Fans.
Ég heiti bara akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
Ka osi di, imeputa akwukwo ozi di elu maka ndi n’enwe otutu oge na ndi n’ekwe ntinye akwukwo nwere olile anya di iche abughi ihe a na – ele anya. Dịka mgbe ị nwere ezigbo ndị enyi – ndị maara ihe nzuzo gị – yana ndị enyi ndị ọzọ – ndị ị hụrụ n’anya mana ha enwetabeghị ntụkwasị obi zuru ezu ma ị maka ịkekọrịta ob.
Na-enye ndi mmadu ihe ha choro – na ufodi ndi mmadu gadi choo (ma kwesiri ya) karie n’ihi na ha kwadoro oru gi site na ubochi otu, ma obu nihi na ha nwere odi iche di iche iche niche akkeukwo ntuputa gi adighi adi.
Eftir MailChimp: Þú þarft ekki að nota það
MailChimp -enye njirimara nke esemokwu na otu maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ. Ka ha na-etinye ya, "esemokwu na ìgwè dị iche na-eme ka ọ dị mfe iziga ndị nwere afọ ojuju ha-na naanị ọdịnaya ha na-eche."
Ég var ụzọ abụọ ị ga-esi na-esite n’akụkụ dị iche iche:
Fyrirtækjaupplýsingar Nafn fyrirtækis CG Boyce Real Estate Co. Vörur og þjónusta choro ụzọ mbu:
Mgbe ọ na-abịa n’ịmepụta ndenye n’ime listi, ka onye na-agụ ga-ekpebi ihe ndepụta a ga-agbakwunye. Nokkuð eftir að senda tölvupóst á MailChimp einhvern veginn 700 sinnum ekki lengur en allir geta ekki notað það. Anyị gụnyere mgbakwunye nke ndepụta niche na isi ala anyị ma tinyezie otu akụkọ kwa izu site na ndepụta ahụ na "ịchọrọ ịgụ ihe dị ka nke a".
Til viðbótar, Nathan Williams og Crazy Eye Marketing og gerðu það kleift að gera:
Ọ bụrụ na mmadụ pịa otu njikọ, anyị maara na ha dịkarịa ala nwere mmasị n’isiokwu ahụ, anyị nwere ike ịmalite ziga ọdịnaya ọzọ na otu isiokwu na / ma ọ bụ ịnwa ree nụwaị.
Ọ bụrụ na mmadụ emegheghị tölvupóstur, anyị nwere ike izipụ otu ozi-e ụbọchị na-esote usoro isiokwu ọzọ iji nwaa ma mee ka onye ahụ mepee email ahụ.
Þú getur líka sent MailChimp gị:
Pịa "Ngalaba" ndepụta di n’okpuru "Ndị niile debanyere aha" pá pịa "Mepụta otu akụkụ"
Ị nwere ike ịhọrọ nke a staður na ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha ma ọ bụ ndị ọzọ ubi. Pịa bọtịnụ "Forskoðun" mgbe ịmechara nhọrọ niile dabara n’ọnọdụ gị (dịka ọmụmaatụ dị n’okpuru ebe a, ndị niile debanyere aha wee banye na listi mgbe 1. júní 2016).
Ndị ọrụ MailChimp Free Mail nwere ike ịhọrọ aka 5 ọnọdụ ma jiri isi ihe mgbagwoju anya.
Lee sagði að þú hafir það:
MailMimp MailChimp – Nzụkwụ 1
MailChimp Mail – Nzọụkwụ 2
Mgbe ụfọdụ, dịka na ahụmịhe m, ị nwere ike ịchọ akụkụ yana njirisi na-etinyeghị na MailChimp – dịka ọmụmaatụ, ndị ọkpọkụ na akwadola nkwado websaịtị gị ma nweeụ naiche na Addbọchị agbakwunyere ‘n’okpuru gögn um debanyere aha kama.
N’ọnọdụ ahụ, ịnwere ike ịmepụta otu kama ịmepụta otu, ma jiri aka tinye ndị debanyere aha n’okpuru otu ndị otu ọkachamara. N’ezie, uru nke Njikọ ahụ na MailChimp fyrir hverja ịchekwa ego na njikwa ndepụta.
Tu on ye
N’ezie, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta, ọ ga-aba uru karị inwe otu nnukwu ndepụta ma jide n’aka na ọ na-ejikwa ya site na iji otu na ngalaba. Ihe bara bụ na n’ụzọ dị otú a, ị na-akwụ ụgwọ otu ugboro na adreesị ozi-e. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta dị iche iche, ma ị nwere otu ndị ahụ [na] ma ndetu, ị na-akwụ ụgwọ ha ugboro abụọ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ gị gbagoro agbakwunyere ga-enwe naanị kọntaktị ole na ole (ihe na-erughị 100), ịnwere ike ịhọrọ nhazi onwe gị nke agaghị etinye gị nsogbu na ISP gị.
Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkachamara Robocity na-eguzosi ike n’ihe na-agụnye ihe na-erughị ndị 50, ebe ọ bụ na ezigaghị m otu ọ bụla ma ọ bụ abụọ ozi ịntanetị n’ọnwa, ọ dị bah na – esi na onye ọbịa m – n’eziokwu, M ji Thunderbird-naanị oge mbụ tupu ịkwaga GMANE, ọ dịghịkwa mgbe ọ bụla ọ na-akpata nzacha spam, ọ dịghịkwa nsogbu na onye na onnt.
Ejiri m otu kọntaktị na ngwọta nke m kwadoro (M na-eji ma GMANE na onye ahịa email m) new aha ya.
Edere m email ahụ ma zigara ya otu (ọ bụrụ na-eji onye ahịa email m, m ga-ahọrọ BBC ka ndị ọzọ zoro ezo ndị zoro ezo new ndị nnata ahụ, ọ gwụla ma anyị wepụtara maka mbipzile nd ozo ole).
Ana m akwado gị ka ị jiri usoro a naanị ma ọ bụrụ na ndepụta gị dị obere, ụzọ dị ala karịa otu narị kọntaktị iji nọrọ na nchebe. Ma ọ bụghị ya, MailChimp bụ nhọrọ kachasị ọnụahịa ị nwere – ọbụnakwa nweere onwe ya new ndị debanyere aha 2.000 – na ngwọta kachasị amasị m ugbu a.
Ndepụta njikwa na hlúa mmekọrịta bụ isi ihe na-agba ọsọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ ọkwa. Atụmatụ ndụmọdụ abụọ a na – esonụ ga – enyere ndị na – agụ akwụkwọ gị aka na obi ụtọ.
Don’tkwesighi ime nke a site na akwụkwọ akụkọ naanị; ị nwekwara ike iji nyiwe ndị ọzọ. Ndi akwukwo edere akwukwo bu ndi nkem Nkwalite DeviantART, ya mere, ikpo okwu bụ ebe kachasị mma maka m ịkọpụta ndị debanyere aha m, na mgbakwunye na ML / ala n’onwe ya na ebe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ndepụta ndị ahụ dị elu ka ị nwekwara ike ire ahịa na ngwaahịa dị iche iche, lelee Lori Soard Ntinye akwụkwọ 4 iji gbanwee ndị debanyere aha gaa ahịa ma megharia gah.
Caitlin Bolnick VentureApp, na-enye abụọ dị oké ọnụ ahịa ndepụta stjórnun Atụmatụ:
Otu n’ime akụkụ ndị kachasị njọ maka anyị na-ewu ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị na ndị na-ede akwụkwọ akụkọ síða na iji MailChimp. Einhverjir eru ekki tiltækir en ég ætti að vera 10.000 talsmenn í boði þegar það er ekki hægt að nota sjálfan mig og það. Lee ụzọ abụọ a kapịrị ọnụ nke meworo ka enwewanye mmụba na oghere na ọnụ aka:
1. Tölvupóstbrot: ọ bụrụ na ndị ọrụ emepebeghị akwụkwọ akụkọ anyị na ọnwa 3 +, anyị na-eziga email nkewa iji mee ka ha mara na a ga-edebanye aha ha n’akwụkwọ akụkọ anyị.
2. Ziga ozi ịntanetị ugboro abụọ Mgbe ụfọdụ: mgbe ụfọdụ anyị ga-ezitere anyị akwụkwọ akụkọ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ala karịa itinye aka na nkịtị ma ọ bụ epnụego. Ég segi að það sé sent á nokkurn hátt ga-ewepụta ndị ọrụ na-emegheghị tölvupóstur anyị ma zighachi otu email ah a na isiokwu dị iche ma ọ bụ ọdịnaya dị iche iji hụ ma anyị nwere ike ịnweta njikọ du el. Oge ụfọdụ, usoro isiokwu adịghị mma nwere ike imetụta ọnụego itinye aka na yabụ ọ dịkwa usoro nnwale bara uru. Ekwesịrị iji nke a mee ihe n’ụzọ na-adịghị mma ka ị chọghị ịkpasu ndị debanyere aha gị ma ọ bụ nke ka njọ, na-emebi ntụkwasị obi ha.
Lettermepụta akwụkwọ akụkọ dị oke mma bụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị nwere otu ndị na – eme ihe nkiri, ndị ahịa, ndị na – akwado ma ọ bụ ndị ọrụ na-enweghị atụụị zieọicheicheicheicheicheicheicheiche Emepụta otu naanị ka ị nwee inwe ndị pụrụ iche nke ndị debanyere aha ma ọ bụrụ na e nweghị ihe zuru oke iji kọọ ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ na ịnweghị oge iji lekọta ndepụtaịgeh iwulite mmekọrịta bụ ntọala dị mkpa maka akwụkwọ akụkọ kachasị mma. , ma ọ nwere ihe ọzọ ị ga – enye ọfụma ịnye oke uru ọ ga – apụkwa iche site na akwụkwọ akụkọ mgbe ochie.
Ollut na-agbagharị -blogia, joka on ollut täällä wagwa ndị na-agụ akwụkwọ gị okwu, ọkachasị
Volt már na-agbagharị blog, amelyben új napok van, ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị okwu,